FIFANDRAISANA AMIN’NY ANY IVELANY : Nanatitra ny taratasy fanendrena azy ny ambasadaoron’i Egypta
Tonga nanatitra ny taratasy fanendrena azy hiasa sy honina eto Madagasikara tamin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Masoivoho vaovao egyptianina Usama Saeed Khalil, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, omaly 23 septambra 2020. 24 septembre 2020
Anisany votoatin-dresaka nandritra ny fihaonana manokana eo amin’ny roa tonta ny fandinihana ireo endrika fiaraha-miasa azo tanterahina eo amin’ny firenena malagasy sy i Egypta, toy ny fananganana fotodrafitrasa sy ny angovo azo avy amin’ny masoandro. Talohan’ity fiaonana ity, ny 22 septambra lasa teo, efa nisy koa ny fanolorana ny dika mitovin’ny taratasy manendry ny ambasadaoron’ny Repoblika Arabon’i Ejypta hiasa sy honina eto Madagasikara teny amin’ny Ministeran’ny raharaham-bahiny, Anosy. Nandray izany teny an-toerana ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba Oliva.
Nivohitra tamin’ny fihaonana teo amin’ny roa tonta nandritra ity fihaonana ny 22 septambra ity ny fanaovana jery todika ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Anisan’izany ny fifanakalozana ara-barotra, ny kolontsaina sy ny lafiny ara-tsiantifika. Voaresaka koa ny tombontsoa iraisana eo anivon’ireo fikambanam-paritra, toy ny Comesa, ny Frankofonia, ny eo anivon’ny Vondrona Afrikanina (UA). Tsiahivina fa efa nanolotra fitaovam-pitsaboana ho fiaraha-mientana amin’ny governemanta Malagasy, iadiana amin’ny fihanaky ny Covid-19 ny fitondrana Ejyptianina ny 06 septambra lasa teo.
Handao an’i Madagasikara ny masoivohon’i Korea Atsimo. Nihaona manokana tamin’ny Filoha ihany koa omaly maraina ny Masoivohon’i Korea Atsimo Lim Sang-Whoo ho mariky ny fiafaran’ny fotoam-pisany eto Madagasikara. Anisany nanampy an’i Madagasikara tamin’ny ady amin’ny covid-19 i Korea Atsimo tamin’ny alalan’ny La2M. Resy lahatra amin’ny ho fisandratan’i Madagasikara amin’ny politika apetraky ny Filohampirenena ihany koa ity Masoivohon’i Korea ity.